सात लाख हेलिकप्टर भाडा तिरेर बिरामी उपचार गराउन बाध्य छन -अध्यक्ष भन्डारी - Sunkesari
एलओ भीई लबको भिडियो सार्बजनिक
फिल्म ‘सूर्य किरण’ अगामी शुक्रबार
कमला घिमिरेको तेस्रो गित सार्वजनिक
अन्तिम पल्ट भेट्न आऊ’ भन्दै प्रेमीको लिंग छेदन
नेपाल चौथो पटक साग च्याम्पियन
सकियो साग, नेपालले जित्यो ५१ स्वर्ण
सात लाख हेलिकप्टर भाडा तिरेर बिरामी उपचार गराउन बाध्य छन -अध्यक्ष भन्डारी
September 28, 2019 September 28, 2019 sunkesari News मुख्य खबर स्वास्थ्य
काठमांडौ धुम्बाराहीमा अवस्थीत ह्याम्स हस्पीटल पछिल्लो समय गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले संञ्चालन भैरहेको छ । हाल हेलीप्याडसहितको सेवा प्रदान गरीरहेको ह्याम्स अस्पताल हेलीप्याड राख्ने तेश्रो अस्पताल हो । समग्र स्वास्थ्य सेवा र हेलीप्याड प्रयोगको सन्दर्भमा ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष रामशरण भन्डारीसंग गरीएको कुराकानी
हेलिकप्टर चढेर कहा“का बिरामीहरुले बढी सेवा लिएका छन् ?
नेपालको भौगोलीक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ह्याम्स अस्पतालमा संचलन गरीएको सेवा लिने संख्या दिनदिन बढीरहेको छ । हेलीप्याड संचालनमा ल्याएको १ महिनामा झन्डै दश बाह् वटा प्लाईट भएको छ । बिशेष गरी दुर्गमा क्षेत्रमा भएका बिरामीको लागि इमर्जेन्सी सेवा दिने सुवीधा हामीले दिएका छौं ।
नेपालमा घुम्न आएका पर्यटकहरु जस्तै कैलाश मानसरोवर आएका भारतीय पर्यटकहरु त्यस्तै हिमाल चढ्न आएका पर्यटकहरुलाई हेलिकप्टर बाट रेस्क्यु गरेर ह्याम्समाबाट ल्याईएको छ । त्यस्तै नेपालका बिरामीहरुको कुरा गर्ने हो भने पोखरा ,पुर्व बिराटनगर झापा , बुटवल र हिमाली जिल्लालगाएत ,धनगढीदेखिका बिरामीहरु हेलीप्याडबाट आएर ह्याम्समा स्वास्थ्यसेवा लिईरहेका छन् ।
हेलिकप्टर को महंगो भाडा तिरेर अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने बिरामीको अवस्था के छ ?
राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्ने हो भने नेपालको लागि हेलिकप्टर को भाडा महंगो हैन ,तर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने महंगोनै छ । जस्तै पोखराबाट काठमांडौ एक डेढ लाखमा लाग्छ भने धनगढीबाट आउंदा ७ लाख हेलीकै भाडा तिर्नुपर्छ तर त्यतिनै पैसा तिरेर उपचार गर्न इमर्जेन्सीमा आउनुपर्ने बिरामीको बाध्यता छ । त्यो सबै एयरलाईन्ससंग सम्बन्धी हुन्छ अस्पताल संग सरोकार हुदैन ।
ह्याम्स अस्पताल कुन स्तरको हो ?
ह्याम्स नेपालमा भएको अस्पतालहरु मध्ये राम्रो सेवासुबिधा दिने अस्पताल हो । अरस्पताल को स्तर सरकारले नै तोक्न सकेको छैन हामीले राम्रो सुबीधासम्पन्न अस्पताल हो भन्ने हो । हामी एक दुई नम्बरमा पर्छौ भन्दैनौ । यहा“ सबैखालका रोगको उपचार छ।
डिप्रेसनको डर लाग्दो तथ्यांक भिडियो सहित
विमान थप गर्न नाट्टाको सरकारसंग माग
दोस्रो डोमेस्टिक टुरिजम मार्ट (डीटीएम २०२०)को मिति घोषणा
युएसए नेपाल आरोहण संघको सहयोग
पर्यटकीय तीन नयाँ गन्तब्य घोषणा
स‌ंविधान दिवसमा पर्यटन व्यवसायी
सन्दीपको ३ ओभरमा तीन विकेट
नेपाल एसीसी यू–१६ रिजन च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश
कप्तान धोनीको उत्कृष्ट ब्याटिङ
नायिका रेखाले क्रिकेट टिमनै किनिन
दाफिन्स एफसी क्यामरुन २१ औं तिलोत्तोमा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा
पत्रकार किरण मरहट्ठाको पुस्तक हु इज हु बिमोचन
कंडेलद्धारा लिखित ऐतिहासीक एकताका आधारहरु बिमोचन